Wararka Maanta: Axad, Jan 20, 2013-Gudoomiyaha Xisbiga UCID oo sheegay in Aqoonsiga la siiyay Soomaaliya uu Dhabar-jab ku yahay Somaliland
Masuulkani oo wareysi gaar ah siiyay laanta Af-soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in aqoonsiga dowladda Mareykanka ay siisay Soomaaliya ay tahay mid cawaaqib xumo u keeneysa qadiyadda gooni isu taagga Somaliland, isagoona masuliyadda arintaasi dusha kaga tuuray dowladda uu hogaamiyo madaxweeyne Siilaanyo.
Masuulkani ayaa sheegay in aqoonsiga ay dowladda Mareykanka siisay Soomaaliya islamarkaasina siyaasaddii labada dhinac ahayd uga soo reebtay mid qura ay tahay mid saameyn ku yeelaneeysa la macaamilkii maamulka Somaliland ee beesha caalamka, wuxuuna sheegay in dowladihii kale ee ay la macaamili jireenna ay mari doonaan wadadaasi.
“Dalku wuxuu ka koobnaa Somaliland iyo Soomaaliya, inay dhinac qura ictiraaftaa waqtigan ma ahayn, maadaama hada labadii dhinac wada hadlayaan, markaa waxaan u aragnay tan imika ay sameysay in ay jug weyn ku tahay Somaliland iyo xitaa wadahadalladii Somaliland iyo Soomaaliya wax weyn ayay u dhimeysaa baan u aragnaa,” ayuu yiri masuulkani.
Masuulkani ayaa ku eedeeyay dowladda imika jirta ee Somaliland in ay masuul ka tahay dib u dhaca ku yimid siyaasadda arimaha dibadda ee maamulkaasi, isagoona sheegay in dowladda Mareykanku ay ku deg-degtay go’aanka ay ku ictiraaftay Soomaaliya.
Sidoo kale waxa uu sheegay in dhawaan ay qaban doonaan shir weeyne looga hadlayo arinta Somaliland iyo badbaadinteeda oo ay isugu yeeri doonaan aqoonyahannada iyo waxgaradka u dhashay Somaliland.
Hadalkan kasoo yeeray hogaaminaya Xizbiga Ucid ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaan dowladda Mareykanku ay ku dhawaaqday in mudo 20 sano kadib ay si rasmi ah u aqoonsatay dowladda Soomaaliya islamarkaasina siyaasaddii laba geesoodka ahayd ee ay kula macaamili jirtay dowladda Soomaaliya iyo maamullada kajira dalka ay hadda ka dhigtay mid qura.